U-Edwin Van Der Hoeven-Ukucamngca, ubuSwele, ukuPhakathi
"Iyonke ingaphezulu kwesixa samalungu ayo"
Thatha uvavanyo kwaye uzifumanele ngokwakho
Ukucamngca kunye nokuziqonda
Khuphela imithambo (yasimahla) kwaye uzibonele ngokwakho
Yintoni ekuyekisayo ekufezekiseni amaphupha akho?
Fumanisa ulwimi oluthethwa ngumphefumlo wakho
Unxibelelwano nehlabathi elingabonakaliyo
Ndiyathemba ukuba uyakufumana okukhangela kule ndawo. Inokusetwa ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo kunokuba ubulindele okanye isetyenziselwa ukusuka phakathi okanye umqeqeshi. Andikholelwa ngokwenyani ekubekeni ikepusi ethi ndingumntu ophakathi ngoku emva koko ndiphinde ndithande i-crypto. Yonke into idibene kwaye ndifumana inkuthazo kuzo zonke iindlela zobomi.
Ndiyabona oku kunye nabathathi-nxaxheba ukuba ndivumelekile ukuba ndikhokele umba kubomi babo. Baza kusebenza kwi-X kodwa bafumanise ukuba i-Y kufanelekile ukuba inikwe ingqwalaselo. Isipho sokuba bafumane iziphumo ezilungileyo kuzo zonke iinkalo zobomi babo. Kwaye kufanelekile! Akukho nto yahluliweyo enye kwenye kwaye ke umfanekiso opheleleyo ubalulekile. Kungelo xesha kuphela apho sinokuthi ubomi bethu buqhakaze ngokupheleleyo.
Sonke singaphezulu kwesibalo samalungu aso! Njengomntu, kubudlelwane, nosapho lwakho okanye nabahlobo bakho kunye noogxa bakho.
I-Facebook-f LinkedIn Twitter phakathi Twilley Youtube
mamela nge iTunes
Ulibale igama eligqithisiweyo
Isicwangciso B - I-Bitcoin ikamva lethu
Ukucamngca kunye noLwazi
Iifom ezisisiseko ze2 zokucamngca
Camngca ngcono ngeBrainwave Entgenment
Ukuphilisa ukucamngca kunye nenyanga egcweleyo
IiMantras ezivela kubuBhuda
Imantra "Vajra Guru" evela ePadmasambhava
I-chakras ezi-7 zomzimba wethu we-etheric
Ukucamngca ngokusisiseko kwe-chakra resonance
Ukucamngca kwe-Sacra chakra resonance
I-solar plexus chakra resonance yokucamngca
Ukucamngca kwe-chakra resonance yokucamngca
Ukucamngca kwe-Throat chakra resonance
Ukucamngca kwamehlo kwe-chakra yeson
Ukucamngca nges Crown chakra resonance
Umntu oNomdla kakhulu (HSP)
I-HSP-Ukujonga okuphezulu kwengqondo
Iimpawu ezi-5 zoMntu oPhezulu woBuntu
Ngaba ungumntu onesidima kakhulu? Thatha uvavanyo lwe-hsp
Uvakalelo oluphezulu kwindawo yokusebenza
Iitalente ezi-5 zomsebenzi onobuthathaka kakhulu
Bhukisha uthethwano oluphakathi
Nika ubungqina ngokusebenzisa ukuqonda okucacileyo
Ukuphilisa, ukuthetha kunye nobugcisa ngokuhamba ngeTrance
U-Edwin van der Hoeven CSNU, osebenza ngemimoya
Uqhakamshelwano kunye namaxabiso
Akukho mveliso kwinqwelo yakho yokuthenga
U-Edwin van der Hoeven-HSP / uvakalelo oluphezulu, imeko yokomoya kunye nokuphakathi
Njengoko amaBuddha esitsho: bonke abantu banento enye efanayo kwaye yile 'ukukhangela ulonwabo'. Inkcazo yolonwabo inezinto ezininzi ezizichazayo; imali eninzi, ukubukeka okuhle, iqabane elimnandi, impumelelo, impilo entle, inkululeko, ubuchule bokuyila njalo njalo.
Unokufuna ulonwabo ngaphandle kwakho okanye ngaphakathi kwakho.
Abantu abaninzi kwilizwe laseNtshona bajolise kulonwabo olungaphandle kwabo, nangona kunjalo, amava abonisa ukuba oku kuhlala kunika ukoneliseka okwethutyana kwaye ukhawuleze uqale ukhangele unqakrazo olulandelayo. Kuxa uhlakulela ulonwabo lwangaphakathi apho une imeko yokuba Inothando kwaye inamandla, igcina ingqalelo yakho ijolise kwaye inike inkuthazo kwimpumelelo yobuqu.
Ndishiya iimeko zakho zangaphandle ngokupheleleyo kuwe. Ndingathanda ukukunceda ngokulima kwangaphakathi kolonwabo, uqeqesha ingqondo kunye nolwimi lweemvakalelo zakho.
Ukwazi ngakumbi? Ufikile kwindawo elungileyo ... ngothando, uEdwin
Ukuqeqesha umntu 85 € / 90min.
Ngaba ubaleka wenze into emsebenzini, unengxaki yokuthetha ngeemvakalelo zakho okanye ufuna inkxaso ethile ngokukhula kwakho okanye ngokomoya? Ndikunika isipili, ndikutyhale ngaphandle kwendawo yakho yokuthuthuzela apho kufanelekileyo kwaye ndikuncede ukuba uzijonge ngendlela eyakhayo neyakhayo.
Ukubonisana okuphakathi 50 € / 45min.
Njengendawo, eqinisekiswe yi-SNU, ndinika ukubonisana ngokusekwe kwindlela yesiNgesi. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba uze nezinto ezifana neefoto okanye ubucwebe. Ndiqhakamshelana nalowo ufuna ukunxibelelana noMoya weLizwe kwaye ndikunike obu bungqina buninzi kangangoko ukususa nawuphina ukungathandabuzeki.
Ukuphiliswa ngokomoya 20 € / 25min.
Fumana amava okukhanyisa okuphilisa ngokomoya. Unyango luthatha malunga nemizuzu engama-25 apho ndingena kwihlabathi lokomoya ukuze ndikwazi ukugqithisa.
Ulwazi malunga nezaphulelo kwirhafu inokufumaneka Apha.
I-Bitcoin kunye nokomoya wentengiso
Imicimbi yokomoya neyemali ngamanye amaxesha ibonakala ngathi iyangqubana. Kule vidiyo yokuqala ndicacisa ukuba ungafunda okuninzi ngawe xa uthengisa esitokisini okanye kwii-cryptos. Ifundisa malunga nomonde, ukugxila, uloyiko, isicwangciso-qhinga kunye neempawu ezininzi ezinokuba luncedo kuwe ebomini.
Isisa kufuneka sihambe ngamaxesha wentlekele
Imali ifana namanzi kwaye kufuneka ihambe ngokukhululekileyo. Indoda sisikhululo esiphakathi kuphela kule barter eqhubekayo. Ke ngoko, hlakulela ukuba nesisa ukuze uvumele indalo yenze umsebenzi wayo.
Unqulo lwenene malunga nentembeko
Ukuzithemba kubonakaliswa ngovuyo olungapheliyo lokuba yonke into ilungile njengoko kufanele ukuba njalo. Konke onokukwenza ngoku kukukwazi ngobomi.
Uvelwano litikiti lakho kubomi bokuyila
I-18 ngoMatshi, 2020
Uvakalelo lwethu yindlela yokufumana amaqondo amde kunye nobungakanani bokwazi kunye nobomi. Yintoni ongena kuyo? Ngaphezulu kokuqonda kwethu, kokukhona siya sikwazi ukuyila ubomi bethu. Ngale ndlela ungasebenzisa ukuqonda kwakho ukukhokelela ubomi obuhle kunye nobuchule bokuyila.
Ukuqonda okuphezulu kakhulu
Ngaba ubuthathaka kakhulu? Ke ubuchopho bakho buqhubekeka ngakumbi kulwazi lweemvakalelo kwaye uyibonisa nzulu ngakumbi. Amava akho eemvakalelo abukhali ngakumbi, anzima ngakumbi, ayaphithizela kwaye ufumana into ngokukhawuleza njengokutsha okanye okwahlukileyo; ukhuthazwa ngakumbi kukuvuselelwa kunomntu ophakathi.
Fika kwindawo oya kuyo iimvakalelo zakho
I-8 ngoJanuwari, 2020
Ndiva kwaye ndibone yonke into, kodwa kuthetha ntoni?
Ngubani okanye yintoni i-HSP?
Imibuzo eli-9 ebuzwa rhoqo
Ukucamngca kunye nokwazisa
Xa umntu ethetha malunga nokukhula kwengqondo nokucamngca 'imeko yokwazi'. Imeko yokwazi ngale ndlela igqitha kumasiko asinika iindlela zokukufezekisa imeko yokuba ukuza. Kwiminyaka edlulileyo bendihlala ndingafundisi amasiko athile, kodwa iindlela zokufezekisa imeko yokucamngca. Ukongeza, ndinceda abantu ukuba bafumane amandla eyimfihlakalo yeemantras ngokwenza eyabo imantra okanye ngokusebenzisa, umzekelo, UVajra Guru mantra wasePadmasambhava.
Ngoku yonke into yahlukile
I-19 ngoJanuwari, 2020
Ukucinga ngumqhubi weembono ezimbini, ngelixa uphefumla, kwelinye icala, ukunika ithuba lokunxibelelana nokuzithemba okuphezulu. Ukucamngca kukufunda ukuyeka ukuya ku-Sasa. Ngoku akukho sithuba nexesha, asinguwe nam. Kwinto yonke ngoku!
Ukukhumbula iiMantras - ithoni kunye nesingqisho
I-8 ngoJanuwari, 2014
Okukhona ukhululeka ukuziva uchaza 'ukuba' kwakho, kuya kuba lula ukufumana ithoni yakho ngelixa ucula amazwi aphindaphindwayo.
Ukucamngca nge chakra
€4.99 €0.00 Kwinqwelo yokuthenga
€4.99 €2.49 Kwinqwelo yokuthenga
Yintoni eyenza umbono wakho, ifilosofi yakho? Ngaba umsebenzi wakho ubalulekile kulonwabo lwakho, ikhaya lakho, into oyithandayo, iqabane lakho kunye nosapho okanye ujonge amava ... uyathanda ukuhamba kwaye ukhetha ukufumana izinto ezintsha ngokuqhubekayo? Ngokombono wam akukho mpendulo ichanekileyo okanye ingalunganga, kodwa inye kuphela impendulo echanekileyo; eyakho. Ngaba uphila iphupha lakho? Okanye awuqinisekanga ukuba uza kuqala njani kwaye uqale phi. Mhlawumbi la manqaku angakunika inkuthazo ... ukuqala.
Xa uthandabuza musa ukubamba
Kuthatha ntoni ukoyisa ukuthandabuza? Ukujonga kwakhona into enokukunika ukhuseleko. Ukuvala amehlo akho kwilizwe lakho langaphandle kwaye ungene. Nguwe kuphela onokubonelela ngokuqinisekileyo ebomini.
NgoNovemba 15, 2019
Lonke uqeqesho, umasifundisane okanye ikhosi oyenzayo ifana nelinye iphazili. Ufunda into kwakhona, ujongana nento ongafuniyo ukuyibona kuwe kwaye ungaphinda ukhule kancinci. Isikhokelo sam ke ayisiyiyo indawo yokugqibela, kufana nokufumana esinye isiqwenga sephazili sobomi.
Ngaba uhlala ucinga ngesizathu sokuba uphile?
I-6 ngoDisemba, 2019
Abantu abaninzi bayoyika ukufa kwaye ngenxa yoko bahlala boyika ubomi ngokwabo. Bayeka ubomi buqhubeke, zimfama, ngethemba lokuba umangaliso uza kwenzeka ngenye imini. Ukuba yonke into iba ngcono. Kodwa njani? Ababoni ukuba bona ngokwabo bayila ubomi babo.
Ngawaphi amandla owatsalelayo?
I-3 ngoFebruwari, 2020
Isibonakaliso sakho se-zodiac sithetha okuthile malunga nefuthe lamandla xa wazalwa. Uphawu lwakho lwe-zodiac lusebenza njengesiqalo! Kule blog ndifuna ukucacisa ukuba ezi nkwenkwezi zinokuba nefuthe kanjani kuwe njengomntu.
Ukulamla kukukwazi kwendalo ukuqonda okucacileyo apho unokunxibelelana khona nokwazi umfi. Cofa apha ngolwazi oluthe kratya >
Amabali e-Ghost akhokelela kumava okholo
I-22 ngoJanuwari, 2020	Akukho zimpendulo
Ilizwe lokomoya likrelekrele kwaye liyazi ukuba linokufumana nini kwaye nini. Ayikukukhohlisa, kodwa endaweni yokuba wenze iinkolelo zitshabalale ukuze uvuleke kummangaliso wobomi.
NgoNovemba 21, 2019	Akukho zimpendulo
Hayi 'inkolo', kodwa uvuyo luyinkolo! Andazi ngawe, kodwa xa ndidibana nomhlobo wam olungileyo, kuyandonwabisa.
U-Edwin ngamaNgesi UManyano lweLizwe loMoya (SNU) eqinisekisiweyo;
Ubhalisiwe njengomfundisi-ntsapho kwi-CRKBO.
Imfihlo kunye namalungelo
Isiteyithimenti sekhukhi (i-EU)
Isiteyithimenti sokoki (US)
Yifumana incwadana yeendaba
© Ulwazi kule webhusayithi luqulunqwe ngononophelo olukhulu, nangona kunjalo kusenokuhlala kukho iimpazamo okanye iimpazamo; Akukho malungelo anokuthatyathwa koku.
yenziwe ❤ by Ixabiso elongeziweyo -U-Edwin van der Hoeven
Cofa le icon kwimenyu ephezulu yasekunene ukuvula le pop-up
Mamela ukucamngca kwakho kwemihla ngemihla apha
Khangela oku kucamngca kwi SIBANYE (lyeeone.io)
Abantu abaninzi banenkululeko Ukucamngca ngesithsaba seCrown Chakra Ikhutshelwe ukuba icamngce ngexesha lenyanga epheleleyo. Ngaba uyazi ukuba indawo yenyanga inxulumene neChakras? Kungenxa yoko le nto kukho ukucamngca okungafaniyo kwe-7, enye kwi-Chakra nganye.
Le pop-up ibonisa ukucamngca okunxulunyaniswa ne indawo ekuyo ngoku inyanga.
I-HSP kunye nemizwa
Ngaba ufuna ukwazi okungakumbi?
Ndithumelele ezinye iinkcukacha